Ajandaha shirweynaha Nabadda ee Taalo-buur oo la soo bandhigay | FooreNews
Home wararka Ajandaha shirweynaha Nabadda ee Taalo-buur oo la soo bandhigay
Hargeysa (foore)- Gudida qaban qaabada shir weynaha nabada ee deegaanka Taalo-buur oo 100 KM dhinaca hawd kaga beegan magaalada Burco, ayaa maanta markii u horaysay daboolka ka qaaday ajandaha lagaga wada hadlayo.
Chief Caaqil Ibraahim Shaybe oo shir jaraa’id ku qabtay maanta Tuulada Taalo-buur ayaa cadeeyay in shirweynahan ay qaban qaabadiisu socotay muddo bil ah isla markaana uu si rasmi ah u furmi doono 27-ka bishan aynu ku gudo jirno, waxaanu sheegay in lagu soo afjari doono khilaafkii u dhexeeyay labada beelood ee dega Deegaamada Qori-lugad iyo Buuhoodle ee xurguftu ku dhex martay deegaanka Kalshaale.
Chief Caaqil Ibraahin Shaybe waxa uu xusay in shirweynahan nabada ay ka qayb qaadanayaan Afar boqol oo Ergay oo laga soo xuli doono deegaamada Labada dhinac ee Qori lugud iyo Buuhoodle, waxaanu intaas ku daray inay sugayaan ergooyinkii shirkan ka qayb qaadanayay inay soo wada gaadhaan Taalo Buur.
Shirkan oo uu 1-kii bishan Iclaamiyay Suldaanka Guud ee ee beelaha bariga Burco Suldaan C/laahi Suldaan Cali oo labada beelood ee oodwadaagta ah ku guubaabiyay inay wada hadal ku soo afjaraan shaqaaqadii Kalshaale siduu dhaqanku ahaa, waxaanu ku guubaabay salaadiinta, aqoonyahanada iyo qeybaha kala duwan ee deegaanka Buuhoodle inay ka soo qeyb galaan gogosha nabadda ee uu u fidiyay.
Previous PostXogo Faahfaahsan oo ku saabsan khilaafka Wasiirrada Maaliyadda iyo Macdanta iyo Biyaha Next PostWasiirka Caafimaadka oo ka hadlay dad Cabasho ka dhan ah cisbitaalka Hargeysa la hor-tagay